ဆံပင်ဆက်မယ်ဆိုရင် . . . – Good Health Journal
ဆံပင်ဆက်မယ်ဆိုရင် . . .
ပျိုမေတို့ရေ ဆံကေသာ အရှည် မြန်ချင်လို့ နှစ်အကြာကြီးစောင့်စရာမလို တော့ပါဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရှည်ကို နာရီပိုင်းအတွင်းရနိုင်ဖို့ Hair Exten­sions တွေနဲ့ ဆံပင်ဆက်တာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Hair Extensions ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ
Hair Extensions မှာ နှစ်မျိုးရှိ ပါတယ်။ Synthetic က ပိုလီအီစတာ ဒါမှမဟုတ် အခရိုင်းလစ်ကနေ ထုတ် လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ဘာအမျှင်တွေ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးကတော့ လူ့ဆံပင်အစစ် ကနေ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ထုတ်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံပင်ဆက်တဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ Hair Extensions တွေက ဆံကေသာ ကို ပိုပြီးတော့လည်း ထူသွားစေနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်ဆံပင်ပါးတဲ့သူတွေ လည်း အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Hair Extensions တွေကို ကျွမ်း ကျင်တဲ့ ဆံကေသာပညာရှင်တွေ ဆက် ပေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ဆံပင်အရှည်က အနည်းဆုံး သုံးလက်မလောက်ရှိတာနဲ့ ဆံပင် ဆက် တာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Hair Extensions တွေကို ကော်နဲ့ဆက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရှိရင်းစွဲ ဆံသားနဲ့တွဲကျစ်ပြီး ဆက်တာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
♦ ကိုယ်ဆက်တဲ့ ဆံသားရဲ့ အလေးချိန် က ကိုယ်ရဲ့ရှိရင်းစွဲ ဆံကေသာအလေးချိန်ထက် မပိုရပါဘူး။ Hair Extensions တွေက အရမ်းလေးရင် ဦးရေပြားနဲ့ မူရင်းဆံကေသာကို ထိ ခိုက်စေပြီး မွေးညင်းပေါက်တွေကို ပျက်စီးသွားစေပါတယ်။
♦ ဆံပင်ဆက်တဲ့အခါ ကြာချိန်က ငါး နာရီကနေ ခြောက်နာရီကြာနိုင်ပြီး သူရဲ့သက်တမ်းက အလွန်ဆုံးခံမယ် ဆိုရင် သုံးလ၊ လေးလလောက်ပဲဖြစ် ပါတယ်။
♦ ဆံပင်ဆက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကို ထိန်း သိမ်းရမယ့် တာဝန်ကတော့ ပိုလာ မှာပါ။ ကိုယ်တိုင် ခေါင်းလျှော်ရတာ အခက်တွေ့နိုင်သလို ဆက်ထားတဲ့ Hair Extensions တွေပြုတ်ထွက် ရင်လည်း Hair Extensions မှာ ခဏ ခဏပြန်သွားတပ်ရနိုင်ပါတယ်။
♦ ဆက်ထားတဲ့ Hair Extensions တွေက အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ပြုတ်ကျတတ်ပါတယ်။
♦ ကုန်ကျစရိတ်က Hair Extensions ရဲ့ ကွာလတီပေါ်မူတည်မှာဖြစ်ပြီး ကွာလတီမကောင်းရင် ခဏပဲခံမှာပါ။
♦ အမြဲမဆက်ထားချင်ဘူးဆိုရင် ယာ ယီတပ်လိုက်၊ ဖြုတ်လိုက် လုပ်လို့ရ တဲ့ Clip In Hair Extensions တွေ ကို အသုံးပြုတာ၊ ဆံပင်အတုစွပ် တာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Categories:	Article, Beauty	/ by Good Health Admin September 15, 2020